ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် စေတမန်: January 2010
အလှူဒါနနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဂေါတာမရွှီးခဲ့သော သူ၏ဘ၀တပိုင်းတစ ယုန်မင်းဇာတ်
စာရေးသူ အရမ်းရီချင်တယ်....အရမ်းလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်...ဘာဖြစ်လို့လဲဆို ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းက သိုင်းရွှီးကျမ်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ...ဒီအကြောင်းကတော့ ဇော်မိုးအတွက်ပါ..ဇော်မိုးက အိုင်းစက်နယူးတန်အကြောင်း ပြောလားလို့ပါ.....
ယနေ့သိပ္ပံပညာရှင်များမှာ မွတ်စလင်မ်ဘာသာဝင်ရှိတယ်... ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ရှိတယ်.... ဟိန္ဒိူဘာသာဝင်ရှိတယ်... ဘာဘာသာဝင်မှလည်း မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုးကွယ်တာလည်း ရှိတယ်...
သိပ္ပံအကြောင်းကို ပြောရင် အိုင်းစက်နယူးတန်အကြောင်း မပြောရင် မပြည်စုံဘူး ...သူဟာ သိပ္ပံပညာရှင် ဘိုးအေတဦးဖြစ်တယ်... သူ့ရဲ့ နည်းဥပဒေ(law) ပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကျန်ရှိတဲ့ နည်းလမ်းများ အသစ်ထက်ဖြစ်လာတယ်.....
သူကခရစ်ယာန်မိသားစုမှ ပေါက်ဖွားပြီး ခရစ်ယာန်တို့ရဲ့ ကျမ်းအကိုးအကားစာအုပ်များကို သူကိုယ်တိုင်ေ၇းသားထုတ်ဝေခဲ့တယ်လို့လည်း သိရတယ်......... သူက ကမ္ဘာမြေကြီးမှာစွမ်းအင်အားရှိတဲ့အကြောင်းကို ဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့...သိပ္ပံပညာရှင် ဘိုးအေကြီး တယောက်ဖြစ်တယ်...
ယနေ့သိပ္ပံပညာ၇ှင်များရဲ့ အယောက်စီတိုင်းရဲ့ နေထိုင်မူကို ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာ သူတို့တွေအားလုံးတော်တော်များများဟာ ဘာသာရေး၊လူမူရေး၊ နိူင်ငံရေးနဲ့ သိပ်အချိန်မပေးနိူင်ကြဘူး.... သူတို့သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပေါ်မှာပဲ သူတို့ဘ၀တွေကို နှစ်မြှပ်ထားတယ်.... သိပ္ပံပညာရှင်တချို့ က ဖန်ဆင်းရှင် မရှိဘူးလို့ ငြင်းချက်ထုတ်တယ်....(ဒါပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ဘူးနော်) သူတို့ တိကျစွာလည်း မပြောနိူင်ဘူး....သက်သေမပြနိူင်ဘူး...(ဒါငါ ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်တဲ့ဘာသာတွေဘက်က ငါက ငြင်းချက်ထုတ်ပေးနေတာပါ)
မင်းတို့ကို ငါဘာပြောချင်လဲဆို ဖန်ဆင်းရှင်မရှိဘူးလို့ ငြင်းချက်ထုတ်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေစကားကို မင်းတို့လက်ခံရင် သူတို့ငရဲ မရှိ နတ်ြ်ပည်မရှိ နိဗ္ဗာန်မရှိတဲ့ ခံယူချက်မျိုးကို ခံယူလိုက်ပါ.......ငါပြောချင်တဲ့စကားကို မင်းနားလည်တယ်နော်...မင်းတို့က သူတို့ပြောတဲ့ သဘာဝက ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်ကြတော့ လက်ခံတယ်...သူတို့ယုံကြည်တဲ့ သေရင်ပြီးပြီ အစဖျောက်ပြီ အဲ့ဒီလိုမျိုးကြတော့ ဘာလို့ မခံယူလဲ....ငါရေးထားတဲ့ စကားကို တွေ့တယ်နော်....သေချာဖတ် သေသေချာချာဖတ်..မင်းက simple letters တွေ ရေးတာကောင်းတယ်...မင်းဒီလို ရေးတတ်နေတာ...
ကမ္ဘာကြီးဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ကြောင့် ဖြစ်လာတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားတဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တွေ မှာ သွားမေးပါလား သူတို့ မင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းပေးလ်ိမ့်မယ်.....
သဘာဝလို့ သတ်မှတ်ရင် ဘာလို့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ရှိဖို့လိုအုံးမလဲ အချိန်တန်မွေးပြီး အချိန်တန်သေရမှာ ဘာလို့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို မျှော်ရည်မှန်းဆ နေကြတာလဲ သဘာဝက ဖြစ်လာတယ်လို့ လက်ခံရင် နိဗ္ဗာန်မလို့ ငရဲမရှိ မွေးပြီးရင် သေရမယ် ဒါပဲ ဒါမှသာလျှင် သဘာဝက ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရမယ် အကုန်ဖြစ်လာတာကြတော့ သဘာဝ သေခါနီးမှ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ လိုအုံးမလား????
ဒါက သိပ္ပံပညာရှင် ခံယူချက်...ဘုရားမရှိဘူးလုိ့ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်...မင်းတို့ဘာသာက ဟိုလည်းမရောက် ...ဒီလည်းမရောက်....အနည်းငယ်နဲ့ ကမ္ဘာမှာ ထောင်ထောင်လုပ်ချင်နေတယ်ဟုတ်လား....မင်းတို့ကျမ်းအစအဆုံးကို လက်ခံတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် တယောက်ရှိရင် ငါ့ကိုပြော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ရှိရင် ငါ့ကိုပြော နားလည်လား..မင်းအတွက်နောက်ခါငါမဖြေနိူင်တော့ဘူး...မင်းလည်း ခေတ်ပညာတတ်တယောက်ပဲ မင်းက ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းငါ့ကို ရှင်းပြဖို့ မလို့ပါဘူး...
(မင်းယုံကြည်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်သိုင်းကျမ်း...ပိဋကတ်သိုင်းကျမ်းအဆိုတွေ ကိန်းဂဏန်းတွေ အများကြီးလွဲနေတာ မင်းမျက်လုံးပိတ်ပြီး ယုံနေတာလား) ကမ္ဘာမြေကြီးအောက်က ငရဲက ဘယ်ရောက်သွားလဲ....မြင့်မိုရ်တောင်ထိပ်က နတ်ပြည်ကကော ဘယ်ရောက်သွားလဲ....
မြင့်မိုရ်တောင်ဆိုရင်လည်း လုံးဝ အလွဲကြီးလွဲနေတယ်...ကမ္ဘာထက်တောင် ကြီးနေတယ်...တောင်ဆိုတဲ့ အရာက မြင်ရာတဲ့ အရာ လေဆိုတာ မမြင်ရတဲ့ အရာ မတူညီတဲ့ အရာနှစ်ခုကို မနှိုင်းယှဉ်ပြနဲ့....ဘယ်မလဲ မြင့်မိုရ်တောင်???
မင်းပြောတဲ့ ဟိုရှေးကတည်းက ဂေါတာမပြောပြီးသွားပြီဆိုတာ ဘယ်မလဲကျမ်း...ဂေါတာမဟောလိုက်လို့ ယနေ့မှန်တဲ့ကျမ်းရှိရင် ငါကိုပြ????ဂေါတာမ ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ သက်သေပြနိူင်ရင် ဒီဘလော့ဂ်ကို လုံးဝဖျက်ဆီးလိုက်မယ်.....နားလည်တယ်နော်.....
ဂေါတာမ ရွှီးလုံးထုတ်ခဲ့တယ် လွဲမှားတခုပေါ့ဗျာ...ဟာသပဲဗျာ....အလှူဒါနနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရွှီးလုံးထုတ်ခဲ့တဲ့ ယုန်မင်းအကြောင်း ကြားဖူးကြတယ်မလား....ခဏခဏသူတို့ အလှူဒါနနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီယုန်မင်း ဇာတ်ထုတ်ကို ခဏခဏသုံးကြတယ်...ထိုစေတ နာ ဒါနနှင့်ပက်သက်၍ ဂေါတာမ ရွှီးခဲ့သော ဇာတ်တော်တစ်ခုရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ (ဂေါတာမ)ဘုရား လောင်း ယုန်မင်းဘ၀ ဖြစ်ခဲ့စဉ်တုန်းက ယုန်မင်းဟာ ဥပုသ်စောင့်သိ ပြီးနောက် မိမိထံ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်လာပါက “ငါ့အသတ်ကိုသာလှူမည်” ဟု အဓိဌာန်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအခါ သိကြား မင်းရဲ့ ကျောက်ဖျားပူလာ၍ လူ့ပြည်သို့ကြည့်ရှုရာ ယုန်မင်း၏ မြင့်မြတ်တဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ကို မြင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိကြားမင်း သည် အလှူခံပုဏ္ဏားယောင်ဆောင်၍ လူပြည် သို့ဆင်းကာ ယုန်မင်းထံ အလှူခံလေတယ်။
ယုန်မင်းလည်း အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် မိမိရှေ့သို့ ရောက်သည့်အခါ မိမိ အဓိဌာန်ပြုထားသည့်အတိုင်း “ကျွန်ုပ်၏ အသားကို အလှူခံပါ” ဟုဆို လိုက်ပြီး အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်အား မီးကိုမွှေးစေလိုက်၏။
ယုန်မင်းဟာ မီးဖိုအတွင်းသို့ ခုန်မချခင် မိမိခန္ဓာအားလှုပ်ခါလိုက်ပါတယ်။ ထိုသို့ လှုပ်ခါရခြင်းမှာ မိမိကိုယ်၌ တွယ်ကပ်နေတဲ့ ပိုးမွှား တွေကို အသတ်မသေစေရန်နှင့်၊ လှူဖွယ်ဝတ္တု သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ဖြစ်စေရန်အတွက် ဖြစ်ပါ တယ်။
ထိုသို့ ခါပြီးနောက် ယုန်မင်းဟာ မီးဖိုအတွင်းသို့ ခုန်ဆင်း လိုက်ရာ မီးမှာသီတာ ရေစင်ကဲ့သို့ အေးမြနေခဲ့ပါတယ်။ ယုန်မင်းအား မလောင်ကျွမ်းပဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ “အသတ်ကို လှူမည်”ဟူသော စေတနာထက်သန်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ယုန်မင်း၏ အသားတို့ အလှူခံ ပုဂ္ဂိုလ်ထံ မရောက်သောငြားလည်း ဒါနမြောက်သွားပါတယ်။
အသတ်ကို စွန့်၍လှူတဲ့ ပရမတ္တဒါန ဖြစ်ပါတယ်။ သိကြားမင်းဟာထိုဘုရားလောင်း ယုန်မင်း၏ သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကို ကမ္ဘာတည်သရွှေ့ နောင်းလူတို့ သိရှိစေဖို့အလိုငှာ တောင်မှ အဆီများကို ထုတ်ယူပြီး ယုန်ရုပ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ လပေါ်ရှိယုန်ရုပ်လေးကို ယနေ့အချိန် အထိ မြင်တွေ့နေရ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဟားဟား ဂေါတာမတစ်ယောက်ကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီဗျို့ .....သူ့မှာ ညမှောင်မှောင်လသာသာထဲမှ ထိုင်ပြီး လကိုကြည့်ရင်း ယုန်ရုပ်က သူ့မျက်လုံးထဲပေါ်သွားပုံရတယ်...ဒါနဲ့ သူ့ရဲ့ ယုန်ဘ၀ဇာတ်လမ်း တပုင်္ဒကို ထွင်ပြီး ဟောဖို့ အကြောင်းဖန်လာတော့တယ်ဗျာ...ဟားဟား.......ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်ကြည့် ယုန်ရုပ့်ကို မပေါ်ဘူး...ကျွန်တော်နဲ့အတူ ဒီလပုံဏ္ဍန့်ကို ကြည့်ပေးကြပါ.....ယုန်ရုပ်ပေါ်လာလို့ပါ...ဟားဟား....(ဂေါတာမ မရူးကြောင်း သက်သေပြနိူင်လျှင် ဒီဘလော့ဂ်အား လုံးဝဖျက်ဆီးမည်....)ဟားဟား ဟာသပဲ
လကမ္ဘာပေါ်မှာ အမေရိကန်နှင့်ရုရှား ယုန်မင်း ပန်းချီကားအား သွားရောက်ယူဆောင်နေပါတယ်....
တကယ်တော့ လပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ မညီမညာအကွက်များဟာ တောင်များ၊ လျှိုများကို မြင်တွေ့ရခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်......
Posted by messenger at 1:04 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, လပေါ်မှာ ပေါ်တဲ့ အရိပ်က ယုန်ရုပ်တဲ့
ဂေါတာမက လီယိုနာဒိုဒီကပရီယို(leonardo dicaprio)လား ဂိုဒင်းဖစ်(ရှ်)(Golden fish)လေးလား
ကွန်မန်တွေထဲမှ စိတ်ကူးတည့်ရာလေးတွေ တင်ပြလိုက်တယ်....
သြော် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တတ်လည်း တတ်နိူင်ပါပေ့….ပိဋကတ်ကျမ်း ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်း ဆိုတာ သိုင်းဝတ္တူလို့ပဲ ပြောရမှာပဲ…ဘာမှ အနှစ်သာရ မရှိတော့ဘူး..ခေတ်က တိုးတက်လာတဲ့ ဟိုဟာ ထည့်ပေါင်း ဒီဟာ ထည့်ပေါင်း ဒီလိုနဲ့ပဲ ခေတ်နဲ့ မညီတာကို ဖျက် အသစ်ထည့်ပေါင်း … ကျမ်းကို ပြင်လာတာ ခဏခဏပဲ….. တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကျမ်းဆိုတာ မရှိတော့ဘူး ကျမ်းက ဘုန်းကြီး ပါးစပ်ပဲ….
စာရေးသူအား ကျန်၇ှိတဲ့ ဘာသာတွေကို တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အရေးအသားမျိုးနဲ့ ကျတော့် အီးမေးနဲ့ ဆင်တူယိုမှား တခုကို လုပ်ပြီး တိုက်ခိုက်တယ်…စာရေးသူတော့ တွေ့တာနဲ့ လိုက်ဖျက်တယ်ဗျာ……ကျုပ်ဒီနေရာမှ အထူးတောင်းပန်ချင်ပါတယ်….
မည်သည့်ဘာသာမှ ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ချင်းမရှိပါ… follower(ဖောလိုဝါး)များလည်း တွန့်မသွားပါနဲ့ လိုက်စရာရှိတာ ဆက်လိုက်ပေးပါ…သူတို့ပြောသမျှ စကားတွေသည် စည်းဘောင်အတွင်းမှ မရှိပါဘူး……ကျုပ့်မေးတဲ့ မွေးခွန်းက တအားရှင်းတာပဲဗျာ…ရှုပ်ထွေးချင်းမရှိပါဘူး……ဂေါတာမ့ပုံက ဘယ်ပုံလဲ ….ရှင်းပြစရာ မလိုဘူး….. ရှုပ်နေမှာ စိုးလို့ အမှတ်စဉ်များကိုတောင် တပ်ပေးထားတယ်ဗျာ…နံပတ်ကို ပြောရင်လုံလောက်ပါပြီ….. တချို့ ကောင်တွေ
ဗျာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းက တအားရှင်းတယ်ဗျာ…ဖြေလိုက်တာ သပွတ်အူလည် ဖြစ်နေတယ်…ရှုပ်နေတာပဲ..ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ် မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူး..ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်နဲ့ …ဒါကိုမှ နောက်အီးမေးတခုနဲ့ ရှင်းသွားတာပဲ ဆိုပြီး လာလုပ်လိုက်သေးတယ်…မှားပါတယ်ဗျာ….အမေးက ရှင်းရှင်းလေပါဗျာ…ေ၈ါတာမပုံက ဘယ်ပုံလဲ????????ဂေါတာမပုံက ဘယ်ပုံလဲ???????????ဂေါတာမပုံက ဘယ်ပုံလဲ??????
မတူညီတဲ့ ရုပ်ထုကိုးကွယ်ထုလုပ်ချင်းအားဖြင့် မဟုတ်တရုပ်ရုပ်တွေ တွေ့နေရလို့ပါပဲ…ဗုဒ္ဓဂါယာမှ ရှိတဲ့ ရုပ်ပုံများကို ကျုပ်အဓိကဖော်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်….ပုံတွေ က များနေတယ်ဗျာ…တရုပ်နဲ့ တရုပ်က မတူဘူးဖြစ်နေတယ်…ကျုပ်ပြောပြီးသားပါ…သူတို့က အဖေနဲ့ ဥပမာနှိုင်းပြီးပြောကြတယ်…ဒါကြောင့် ကျုပ်ကလည်း သူတို့ ဥပမာအတိုင်းပါပဲ အဖေပုံဖြစ်နေရင်တော့ အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ ပထွေးပုံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ပထွေးပုံတွေ များနေလို့ပါ…….အခုက ဂေါတာမရဲ့ ပုံဆိုရင်ကောင်းတာပေ့ါဗျာ…အခုမြန်မာလူမျိုးတွေ ၀က်ဆိုဒ်တွေ မှာ တင်ထားသုံးနေတဲ့ ဂေါတာမပုံက ဘာအမွေးအမျှင်မှ မ၇ှိဘူးဗျာ…ဒီလိုလဲ မဟုတ်သေးဘူးလေဗျာ…..ငနာရဟန်းနာတွေဟာ တိဗက်ကို ဂေါတာမရဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဆံပင်၊ အမွေးအမျှင်များ(မှုတ်ဆိတ်မွေး၊ ပသိုင်းမွေး)၊ သင်္ကန်းများကို ပေးခဲ့တယ်လို့ buddism history ထဲမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်….ဒီအခါမှာ မြန်မာဘုန်းကြီး၊ တလိုင်းရဟန်းနာများကို သူတို့ စိတ်ကူးတည့်ရာ ဘယ်သူပုံကို ကြည့်လုပ်လိုက်လဲ မသိဘူး ပြောင်ပြောင်ချောချောနဲ့ အမွေးအမျှင်မရှိတဲ့ ပုံ ဖြစ်နေတယ်….ဒီအခါမှာ အရမ်းကြီးလွဲသွားပြီးလေ….
Best Present ရဲ့ အားရွှီင်္းတဲ့ ရွှီးလုံးလေးပေ့ါဗျာသူရေးထားတာ အရှည်ကြီးပဲ ကူးမပြတော့ဘူး
ဗုဒ္ဓဟာ တစ်လောကလုံးမှာ အချောဆုံးလူသားဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် ဒီလို ချောရသလဲဆိုရင် သူပါရမီဖြည့်ကျင့်ခဲ့တဲ့ ဘ၀ပေါင်း လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလပတ်လုံး ဘယ်လူသားမှ မလှူဖူးသော အလှူအမျိုးမျိုးကို လှူခဲ့လို့ ပါ။
ငါတို့က ရုပ်အချောအလှ မော်ဒယ်( model ) ပြိုင်ပွဲဝင်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူးကွာ…ရုပ်ရှင်မင်းသား ရွေးပွဲလုပ်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး…စကားနိူင်လုနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး…လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းတဲ့ဗျာ မတန်တဆပြောချလိုက်တာ ပါးစပ်နဲ့တောင် ဆန့်မယ် မထင်ဘူး…..(အင်း ကပ္ပလီ နီဂတိုးတွေ တောင် သွားသတိရမိတယ်) လက်ရှိဂေါတာမနေထိုင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ တစ်ကမ္ဘာတောင် မကုန်သေးဘူး....၇ွှီးတာကလေ နည်းနည်းလေး ချင်ချိန့်ပြီး မရွှီးဘူး.... ရပါတယ်ဂေါတာမကို ချောချောလေးဆိုတော့ လည်း ချောချောလေး ပေါ့ဗျာ….လီယိုနာဒိုဒီကပရီယို(leonardo dicaprio)လေးလား
ဒါကတော့ zaw moe (ဒီကောင်က ခဏခဏ ဖန်ဆင်းရှင် ဘုရားအကြောင်းကို ဘယ်မှာလဲလို့ လာလာမေးတယ်…)
You always talk Buddha is Kalar (Black Man). If i go and stay at India, I become Kalar? Do you know northern India and southern India people are quite different in wealth, skin color and knowledge. Buddha skin color is golden and Race is King race of northern India of mountainous area. There are very rare on the earth. Do you want to know our real Buddha look like? Go and worship Maharmyatmuni statue in Mandalay.If there are any person look like this statue on the whole world, i will worship. But how your God look like? If you can not answer, you better appologize(apologize) Buddha and close your blog.
ဇော်မိုးရေ မင်းတို့အတွက် ငါခဏခဏရေးတယ်…ဒီပြင် ဘာသာဝင်တွေရဲ့ ကျမ်းအကြောင်းကို ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ ငါခဏခဏပြောတယ်….မင်းနားလည်ပုံမရဘူး…မင်းကိုတခုပြောလိုက်မယ်…ကမ္ဘာကို ဥပမာ ဆယ်ပုံ ပုံလိုက် ခရစ်ယာန်၊ မွတ်စလင်မ်၊ ဟိန္ဒူ ဒီဘာသာဝင်တွေ အားလုံးဟာ ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဆိုတာ ယုံကြတယ်….ဒီဘာသာဝင်သုံးမျိုးနဲ့တင်ပဲ ကမ္ဘာကြီး၇ဲ့ (၇)ပုံကျော်လောက်ကို ဖန်ဆင်းရှင် ရှိကြတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ရတယ်……ကျန်နှစ်ပုံ ခွဲက သဘာဝလို့ ယုံကြည်တယ်ပေါ့၊……တချို့ က အဖြေမရှိဘူး..မသိဘူး….…ဒီအထဲမှာမှ ကွန်မြူနစ်၊ ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်ချင်း၊မင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့…ကွန်မြူနစ်ကတော့ ပိုများတာပေါ့ ….ဒါကြောင့် ငါအကြံပေးချင်တာ ဒီဖန်ဆင်းရှင်၇ှိတယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာဝင်တွေဆီမှာ မင်းမေးလို်က်ရင် ပိုကောင်းပါလ်ိမ်မယ်…ဒီကောင့်စာကို ကျွန်တော်ဘာသာလိုက်မပြန်ပေးတော့ဘူး….သူက ကျွန်တော့်ကို ဂေါတာမကုလားကို ခဏခဏ ကုလားလို့(အမည်းကောင်လို့) ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးတဲ့ ဗျာ..ကုလားကို ကုလားလို့ မခေါ်ရင် အရားကြီးလို့ ခေါ်ရမလား…အနည်း (အနည်းလား အများလားတော့မသိ)လို့ ခေါ်ရမလား....ညီလေး ဇော်မိုးရေ …မြောက်အိန္ဒိယနဲ့ တောင်အိန္ဒိယနဲ့ ကွာခြားတာကိုလည်း ကိုယ်သိပါတယ်….ဂေါတာမနေထိုင်သွားတဲ့ နေရာကတော့ ယခုနီပေါနိူင်ငံဖြစ်နေတယ်…ဒီနီပေါတွေ က အသားဖြူတယ်..အသားမည်းတာလည်း ရှိတယ်…တနိူင်ငံလုံး ဟိန္ဒိူဘာသာဝင်များ ဖြစ်တယ်…မွတ်စလင်မ်၊ ခရစ်ယာန်အနည်းငယ်ရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတအားရှားတယ်လို့ သိရပါတယ်…ဂေါတာမမျိုးနွယ်ဟာ နီပေါလူမျိုးလားလို့ မေးစရာရှိမယ်… မဟုတ်ပါဘူး…..ဂေါတာမရှိစဉ်လက်ထက်မှာ နီပေါလူမျိုးများဟာ လူရိုင်းလူမျိုးစုပဲ ရှိပါသေးတယ်…..ဂေါတာမမျိုးနွယ်များဟာ အိန္ဒိယနိူင်ငံမှာ အနည်းငယ်၇ှိပြီး သီ၇ိလင်္ကာမှာ အနည်းငယ်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်…ဂေါတာမက ဘုရင်မျိုးနွယ်ဆိုတာ ကိုယ်လက်ခံပါတယ်..ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်လည်း ဂေါတာမဟာ ဘုရင်ဖြစ်နေခဲ့လို့ ဒီပြသာနာအရှုပ်အထွေးတွေ ကို မင်းတို့နဲ့ ဖြေရှင်းနေရတာပေါ့… ဂေါတာမသာ သာမန်လူသာ ဖြစ်ခဲ့ရင် မင်းတို့နဲ့ငါ ဂေါတာမကြောင့် ညင်းဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး…..ဂေါတာမဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် သိမှာ မဟုတ်ဘူး ......မင်းဖြစ်စေချင်တဲ့ ဂေါတာမရဲ့ အသားအယောင်ကို ရွှေရောင် ဖြစ်စေချင်လည်း ရတယ်…ဒါပေမဲ့ မင်းဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဂေါတာမပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်….ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အဖြေက ဂေါတာမရဲ့ မူလအသားအရည် မူလရုပ်ပုံနဲ့နီးစပ်သော ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးကို လိုချင်တာပါ…ဂေါတာမရဲ့ ယခုလက်ရှိသူမျိုးနွယ်များဟာလည်း အမဲလူမျိုး၊ အသားညိုတဲ့ လူမျိုးများ(ကုလားရုပ်)ပေါက်ပါတယ်ကွာ…Maharmyatmuni(မဟာမြတ်မုနိ) က မင်းတို့ စိတ်ကူးနဲ့ ရေးဆွဲတာပဲကွာ သူ့နိူင်ငံမှာ ၇ှိတဲ့ သူတွေ က သွန်းလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်ထုကို မင်းက မဟုတ်ဘူးလို့ ညင်းရင် မင်းဟာ ဂေါတာမ့ကို ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဂေါတာမ့ရဲ့ ဖန်တီးရှင်ပဲ ဖြစ်သွားလိုက်မယ်..ငါ့ညီရေ….ကြွားချင်တာ အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကွာ …..အဖြေမှန်က အဓိကကွာ..
ဒီမြန်မာနိူင်ငံကို အေဒီနောက်ပိုင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာက ရောက်ရှိလာတယ်…မင်းထက် ဟိုကသွန်းလုပ်ထားတဲ့ ရုပ်က ဘယ်သူပိုမှန်နိူင်လဲ….?မင်းတို့ အချောဆုံး ဖြစ်စေချင်လည်း ရတယ် အသားယောင်က ရွှေရောင် ဖြစ်စေချင်လည်း ရတယ်….ဒါပေမဲ့မင်းတို့ စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးလိုက်တဲ့ ဂေါတာမပဲ ဖြစ်လ်ိမ့်မယ်…ငါပြောတာရှင်းတယ်နော်……ဂေါတာမရဲ့ ရုပ်ပုံနီးစပ်မူကို ရရှိမှာ မဟုတ်ဘူး…
အားလုံးကို ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်. ကျွန်တော် မအားလို့ စာမရေးတာပဲ ရှိလိမ့်မယ်….ဒီဘလော့ဂ့်ကို ကျတော်ဘယ်တော့မှာ မဖျက်ဆီးဘူး ကျတော့်ဘလော့ကို အခြားတယောက်ဖျက်ဆီးသွားရင် အသစ်ထပ်လုပ်မယ်….ဘယ်အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှာလည်း တောင်းပန်ဖို့မလိုဘူး…..ကျွန်တော်မှန်တာကို ပြောတယ်…….. ဟုတ်တာကို ပြောတယ်…တကယ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကျမ်းဆိုတာ မရှိတော့ဘူး ကျမ်းက ဘုန်းကြီး ပါးစပ်ပဲ….
gu gu (ရေးထားတာ တအားရိုင်းတယ် ဒါပေမဲ့ ဟာသလေး ဖြစ်နေလို့ပါ)
ကိုယ်တော်ချောပြောတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ဘာသာမဲ့လုပ်ဖို့ ..ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အ--ကိုယ်ပြန်(------)ကုန်ကြမှာပေါ့...အမေဆိုတာကိုဘာသာရေးအသိနဲ့ အမေနေရာမှာထားကြတာမဟုတ်လား။ အာဏာပိုင် အစိုးရကအမေမ(---)ရဆိုတဲ့ဥပဒေထုတ်ထားတာမှ မဟုတ်တာ။
ဒီကောင်ဘ၀ကလည်း သနားစရာဗျာ…သူခမျာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာ တခြားအကြောင်းမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်.. ကိုယ်မိခင်အပေါ်မှ ပြန်ပြစ်မှားမိမှာ စိုးလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ် နေရတယ်သဘောမှာ ရှိတယ်….(မှားပါတယ် guguရယ်)မင်းဘ၀ကလည်း ….. မင်းတို့ကို ဘာသာမဲ့ဖြစ်ခိုင်းတာ မိခင်ကို ပြန်ပြစ်မှားဖို့ ပါလို့လားကွာ …..ဒီကောင်က ခွေးအတွေးတွေးတဲ့ ကောင်ပဲဗျာ…(သူကိုတောင် ကျွန်တော်သနားမိတယ်….မိဘကို မပြစ်မှားရအောင် ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မလုံလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေရယ်ပုံစံမှာ ရှိတယ်ဗျာ….စိတ်ထိန်း….မောင်ရင် စိတ်ထိန်း….ဘယ့်ဥပဒေမှ မဟုတ်ဘူး ဘယ့်လိုလူမှ ခွင့်မပြုတာကွာ…မင်းမလို့ ရိုင်းရိုင်းတွေးတတ်တယ်)
မဆိုးပါဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေ နဲ့ နေ့စဉ်အွန်လိုင်းမှာ တွေ့ဆုံရတာအဆဲနည်းမျိုးစုံတွေ့ရတော့တယ်…တကယ်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆဲတာကို လုံးဝမလက်ခံဘူးဗျာ..ဆဲတာတွေ့ရင် လိုက်ဖျက်တယ်…ဆဲမိမှာစိုးလို့လေ ဒီစာသားမျိုးတွေရေးတယ် ပထမဒီစာသား ရှင်ဂေါတာမသည် မိန်းမအမျာကြီး ယူသော အကုသိုလ်ကြောင့် နောက်ဘ၀ မိန်းမလျာဖြစ်သည်ဟု ၀န်ခံလျှင် ဆဲကြ!!!! ဆဲ တယ်မရဘူး နောက်တခု ထပ်လုပ်တယ် ဗုဒ္ဓဘာသာ(၁၀)ယောက်မှာ (၉)ယောက်သည် မိုက်၂ရိုင်း၂ ဆဲတတ်ကြသည်. )မရဘူး ဆဲသေးတာပဲ စီဘောက်ဆို ခဏခဏပိတ်ထားလိုက်တယ်…ဆဲတာကြီးပဲ တွေ့နေရလို့….ကွန်မန်တွေဆိုလည်း ဆဲတာ လိုက်ဖျက်တယ်..
ဒါကို ကျွန်တော်ကို စွပ်စွဲသေးတယ်..ကျွန်တော်က ဆဲတာကိုပဲ နှစ်သက်နေသလိုလိုလို မှားပါတယ်ဗျာ….ဆဲဆိုချင်းသည် လူအထင်မြင်သေးခံရရုံမှ တပါး ဘယ်အကျိုးအမြတ်ကိုမှ မရနိူင်ပါဘူးဗျာ(ကိုယ်တော်ချောသွန်သင်သည်.... ဂေါတာမသွန်သင်နေသည့်မဟုတ်)
Posted by messenger at 6:12 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဂေါတာမက လီယိုနာဒိုလား ဂိုဒင်းဖစ်လား
Posted by messenger at 4:05 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဂေါတာမဆိုတာ ဘယ်သူလဲ
ဂတုံးတွေကြည့် ကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူး ဂေါတာမက နိုင်ငံရေး လုပ်ဖို့ ဘယ်တုန်းကပြောခဲ့လဲ။ဂေါတာမတောင် ဘုရင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးတွေ မလုပ်ချင်လို့ တောထွက်ခဲ့တာလေ။ သူများမောင်နှမကြား ဘာဝင်ရှုပ်တာလဲ စစ်အစိုးရက ပစ်သတ်တာတောင်နည်းသေးတယ်။ အိမ်ဆက်မဆောက်ဖို့ ကန့်ကွက်တာနဲ့ ဘာသာ သာသနာနှင့် လူမျိုးများကို နိမ့်ပါး ကွယ်ပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရာရောက်သွားရောလား... အလကားဘာသာရေဗန်းပြ ပြီး အနောက်နိုင်ငံတွေသွားချင်လို့ ကလိမ်ကကျစ်တွေလုပ်ပြနေတာ...နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တော့ မသွားချင်ဘူး အမေရိကန် အနောက်နိူင်ငံတော့သွားချင် တယ်ဟုတ်လား….. ချီးဗူးဂတုံးတွေ အစားချောင် အနေချောင်တဲ့ နေရာမှာ နိူင်ငံရေး ဗန်းပြပြီး ငြိမ့်ငြိမ့်လေး နေချင်တယ်ပေါ့ ဟုတ်လား…..
ဒီမိုကရေစီနဲ့ ဂတုံးနဲ့ လားလားမှမဆိုင်ဘူး.. ....က်ိုယ့်လုပ်ရမဲ့တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင်တော့ မထမ်းဆောင်ချင်ဘူး…. နိူင်ငံရေးက လုပ်ချင်သေးတယ်
နောက်တစ်ခုလုပ်စားတာ ရှိသေးတယ် သေသွားတဲ့သူကို (၇) ရက်မြောက်မှာ ရက်လည်တဲ့ကိစ္စ .. ဂေါတမရွှီးခဲ့တာ သေတဲ့သူက သူသေခါနီး စိတ်စွဲလန်းရာမှာ သန္ဓေတည်တယ်လေ…… ပြီးပြီပေါ့ ...
ဂတုံးတွေက စားချင်တော့ ဂွင်ဖန်ပြီးလုပ်တာ ဂေါတမ သေတာတောင်ရက်လည်ခဲ့လို့လား.. ဒီကြားတဲ့ ဂတုံးတွေ ကြပ်ပေးသလိုလျှောက်လုပ်တဲ့ ငကြောင် တွေကလည်းရှိသေးတယ်။ သေတဲ့သူရဲ့ ဓါတ်ပုံမှာ ထမင်း တွေ ဟင်းတွေ ဆေးလိပ်တွေ ချပြီး အမွှေးတိုင်းထွန်း နဲ့ ဘာလုပ်ကြတာလဲ ကြွက်စာကျွေးတာလား……..
ဂေါတမ ကုလား ရွှီးသလိုဆို သေတဲ့သူက သေပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း စိတ်စွဲလှမ်းရာမှာ သန္ဓေတည်သွားပြီလေ။ ဂတုံးတွေ .. ဂတုံးတွေ .. တတ်လည်းတတ်နိုင်လွန်းတယ်။ အခု ဦးအောင်ဆန်းဦးကို ဗုဒ္ဓဘာသာက ထုတ်မယ်ပြောရအောင် ဒီဂတုံးတွေကို ဘယ်သူက ထုတ်ပိုင်ခွင့် သွင်းပိုင်ခွင့်ပေးထားလို့လဲ ...
အဲဒီလို ဗုဒ္ဓဘာသာ က ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဦးအောင်ဆန်းဦးက နိဗ္ဗာန် မရောက်တော့ဘူးလား၊ နိဗ္ဗာန်ဗီဇာ ပိတ်လိုက်တာလား .. ...... သူ့ဘဝမှာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ အများကြီးလုပ်ခဲ့တာ ရှိသေးတယ်လေ။ ဒီကတုံးတွေ သာသနာ စောင့် နတ်မင်းကြီး တွေ မူလီမင်းကြီးတွေ ကို ဂတုံးတွေ က ဂွင်ကျော်တာ။ ဂေါတာမတောင် ဘုရင်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးတွေ မလုပ်ချင်လို့ တောထွက်ခဲ့တာလေ။ ဂတုံးဘုန်းးကြီးတွေ လုပ်တာဆို ဘာလုပ်လုပ် စောက်ရူးတွေက အကုန်ကောင်းတယ်။
ဒီဂတုန်းတွေကို များများလှူ ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတဲ့ ဘယ်မှာရှိမှန်းမသိတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်လိမ့်မယ်။ သြော် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ငါရင်လေးတယ်နော်…ယခုဘ၀မှလည်း မကောင်းမူနဲ့ ကျော်စော်တယ်….အခုလည်း နတ်ပြည်လည်း ပျောက်ပြီး ငရဲပြည်လည်း ရှစ်ထပ်(အိမ်သာ..ရေချိုးခန်း ရေမီးအပြည်အစုံနဲ့ ဂေါတာမကိုယ်တိုင် ပင်ပင်ပန်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ် ငရဲ ရှစ်ထပ်)လည်း ပျောက်ပြီး….ထူးအိမ်သင်ခမျာမှာလည်း သနားပါတယ်..သူခများ သေသွားသေသွားတယ်…သူဆိုသွားထားတဲ့ မြင့်မိုရ်တောင်ဆိုတာ တကယ်မရှိပဲ သီဟိုဋ်က ငနာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ လေရွှီးအဌာကထာစကားဆိုတာလေးတောင် သိမသွားရရှာဘူး။….. အမှန်မှန်ကတော့ ဂေါတမကိုယ်တိုင် ရွှီးထားတာလေ... နောက်ဆုံးတော့ ရဟန်းနာကို အပြစ်ပုံချတာပေါ့ဗျာ....(နောက်ပိုင်း စာရေးသူ ရေးဖို့ရှိသေးတယ်..တကယ်တော့ ဂေါတာမဟာ အရူးတယောက်ပါပဲ.... ညမှောင်မှောင် လသာသာမှ သူမြင်တာတွေ သူကြားနေတာတွေ ရောက်တတ်ရာရာ စကားတွေနဲ့ ပြောချင်တာကိုပြော... ဘယ်သူ့မှလည်း တွေ့ရတာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူး...ဘုရင်ကလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အရှိန်လေးကလည်း ရှိသေး...စကားကလည်း အာရွှီးတာကကောင်း...နောက်လိုက်ကလည်း ကောင်းတော့.... သူပြောသမျှကို အဟုတ်ကြီးထင်ပြီး စကားများကို ချဲ့ကားပြောဆိုပြီးတော့ နောက်ဆုံးတော့ အရူးတယောက့်ရဲ့စကားတွေကို အကောင်းတွေက ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ လိုက်ရှာနေရတယ်...ဂေါတာမသာ ဘုရင်မိသားစုကနေ မမွေးခဲ့ဘဲ သာမန်မိသားစုဘ၀ကနေ မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ယနေ့ဂေါတာမဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး...ကြားတောင် ကြားဖူးခဲံ့မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး...ယခုလို စာရေးသူနဲ့ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ဒီိလို ညင်းခုံစရာတောင် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး.... တောတဲမှာ တိရစ္ဆာန်အစားဖြင့် သေနေပြီ)
ဒါကြောင့် စာရေးသူ ကဗျာလေး စပ်ဆိုချင်းပါတယ်
နိဗ္ဗာန်ကလည်း ဘာမှ မရှိ…
ဘာမှမရှိတဲ့သူများ အမေ၇ိကန်/အနောက်နိူင်ငံ သွားဖို့ သူတို့ကြိုးစား…
သင်္ကန်းကို အရောင်ပြ …
ဒီဘ၀မှတင် အစားချောင်ရုံ/ အနေချောင်ရုံ ကျေနပ်ပါပြီဗျ…
ဂတုံးဘုန်းကြီးများ လူနည်းစုကို အမြဲအနိူင်ကျင့်
ပြေးဟေ့ ပြေးဟေ့ အနောက်မှ သေနတ်တွေနဲ့ဟ …
သေနတ်မပါတဲ့သူတွေပဲ ငါတို့နိူင်တာဟ…. ပြေးဟ….ပြေးဟ...
(စာရေးသူမှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် အကောင်းဆုံး အကြံပေးချင်တယ် ဘာမှ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတခုကို ကိုးကွယ်နေရတာထက် ဘာမှမကိုးကွယ်တာက ပိုပြီး ကောင်းပါတယ်...)
Posted by messenger at 3:37 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, သာသနာ့စောင့်နတ်တွေကို ဂွင်ကျော်တဲ့ ဂတုံးများ
ကျတော် ကွန်မန့်များကို နှစ်ရက် ပိတ်ထားခြင်းဟာ ကျတော်မအားသေး၍ ပိတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်.. ခင်ဗျုားတို့ ရေးတာ ခင်ဗျားတို့သိပါတယ် ...တချို့ က မဆိုင်တာကို လာရေးတယ်...
ခင်ဗျားတို့ စကားကို ကျတော့်ပို့စ်ရဲ့ အောက်မှာ ရေးတဲ့စာတွေဟာ တစ်ခုမှ ကိုက်ညီခြင်း မရှိဘူး တချို့ က အင်ဗိုက် လုပ်ပြီး ဆွေးနွေးချင်တယ်... အကုန်လုံးကိုသာ လိုက်ဆွေးနွေးပေးနေရရင် ကျတော်မှာ လုပ်စရာရှိတဲ့ တခြားအလုပ်လုပ်နိူင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။။
မေတ္တာရှေ့ထားလျက် ဒီပ ဆိုပြီး လာရေးသူရှိသေးတယ်..ဖိတ်ခေါ်တယ်... ဟုတ်ပြီ ခင်ဗျားတစ်ယောက်တည်းကို အချိန်ပေးမယ်... ကျွန်တော်မေးတာ ဖြေလို့ရရင် ခင်ဗျာ့ကို ကျွန်တော်က အချိန်ပေးပြီး ဆွေးနွေးမယ်ထား ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံထဲမှာ ပါတဲ့ ငရဲက ဘယ်မလဲ... နတ်ပြည်က ဘယ်မလဲ ..... မြင့်မိုရ်တောင်ဆိုတာဘယ်မလဲ.... အဌာကထာ စကားဆိုပြီ လွယ်လွယ်ပြောလို့ မရဘူး... လူနှစ်ယောက်သုံးယောက်သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဘာသာမဟုတ်ဘူး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာလေးခုထဲမှာ နောက်ဆုံး အဆင့်ရှိတယ်..
အဌကထာ ကျမ်းအကိုးအကား အာရွှီးထားတာပါလို့ ပြောလို့ မရဘူး .... ဘယ်သူမှ ဂဏာန်းအတိအကျနဲ့ မကိုးကားကြဘူး.. အဓိပ္ပါယ်ကို ပို၍ ပိုလွင်အောင်ပဲ ကိုးကားကြတယ်.. ယခုမျက်မှောက်ကာလက သိပ္ပံရဲ့ တွက်ချက်မူထောက်ပြသာလျှင် ကျမ်းအကိုးအကား အဌာကထာလို့ ခင်ဗျားတို့ ပြောရင် ကျတော်က ခင်ဗျားတို့ ကျမ်းရှိသမျှ အားလုံးတို့သည် အနှစ်အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ပြောရင် ခင်ဗျားဘယ်လို ဖြေမလဲ ကိုဒီပ...
ခင်ဗျားကသာ စကာ့ကို မေတ္တာရှေ့ထားတယ်လို့ လွယ်လွယ်နဲ့သုံးတာ တကယ်တော့ ခင်ဗျားသုံးသွားတဲ့ စကားမှာ မေတ္တာမရှိကြောင်း ပေါ်လွင်သွားတယ်... မွတ်စလင်မ်ဘာသာဝင်များဟာ သောကြာနေ့မှာ ဗလီတတ်တယ်.. ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များဟာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသွားတယ်...
ဒါ့ကို ခင်ဗျားက အပြစ်တခုလို လိုက်မြင်တယ်ဆိုကတည်းက ခင်ဗျာ့ရဲ့ အမြင်ဟာ တိမ်လွန်းပါ့တယ်.. ကိုဒီပရေ.... ဒီဘာသာဝင်တွေဟာ (၇)ရက်မှာ တရက် ဘုရားဝတ်ပြုကြတယ်.. ခင်ဗျာတို့ကြတော့ရော လူတသက်လုံးကို အရူးလုပ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ဘူးလား..... သံသရာဝဋ်ကြွေးပါဆိုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဘုန်းကြီးကို အတင်းဇွတ် လှူခိုင်းတယ်လို့ ကျွန်တော်က စွပ်စွဲရင် ခင်ဗျားဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲ...
အဆင့်သင်အဖြေတွေရှိရင် ခင်ဗျားနဲ့ ကျတော် ဆွေးနွေးဖြစ်လိမ့်မယ်.... ခင်ဗျားကျတော့ပို့စ် တစ်ခုမှ မဖတ်ဘဲ မေတ္တာရှေ့ထားတယ်လို့ မပြောပါနဲ့ ခင်ဗျာ့ရေးသမျှ တစ်ခုမှလည်း အဖြေမပါသေးဘူး.......ခင်ဗျာ့ကို အောက်ကနေရာမှာလည်း ကျတော်ပြောပြထားပြီး ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားမဖတ်ဘူး...
ခင်ဗျားပြောချင်တာကို ဇွတ်လာပြောတယ်...ခင်ဗျားတို့ ကို ကွန်မန့် ပြန်ဖွင့်ပေးမှာ...စိတ်ချပါ..... မအားသေးလို့ပါဗျာ....နားလည်ပေးပါ...
Posted by messenger at 6:24 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ
အောက်ကတော့ မေးခွန်းကို ကချင်ပြည်နယ်မှ ကုလားဘွဲ့ခံ စန္ဒောဒယကနေပြီးတော့ မေးထားတာပါ
အရှင်ဘုရား၊ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ များသောအားဖြင့် မြင်းမိုရ်တောင်ကို ယူဇနာ ရှစ်သောင်းလေးထောင် ရှိ၏ဟု ပြောကြပါသည်။ သဒ္ဒါကြီး ပုဒ်စစ်စုံကျမ်း(၁၃၄)၌ ပြထားတာကတော့ ဂီရိရာဇာ-မြင်းမိုရ်တောင်မင်းသည် အဋ္ဌသဋ္ဌိသတသုဗ္ဗေဓော-ယူဇနာ တသိန်းခြောက်သောင်းအစောက်ရှိ၏-ဟု ပြဆိုထားရာ အထက်ပါစကားနှင့် ဆန့်ကျင်နေပါသဖြင့် ဘုရားတပည့်တော်အား ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
(အရှင်စန္ဒောဒယ-ခေတ္တ ကချင်ပြည်နယ်(သချိုင်းကုန်း)) (ဘာဖြစ်လို့လဲဆို လူတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာ နိဗ္ဗာန်တံခါးဝကို ရှာလိုရမယ်ဆိုတဲ့ အဆိုလေးကြောင်းပေါ့ဗျာ ယခုက ခေတ်မှီလာပြီလေ မြို့ တွေ က စည်ကားလာပြီးဆိုတာ သချိုင်းကုန်းပဲ တိတ်ဆိတ်တာကို )
မြင်းမိုရ်တောင်သည် သမုဒ္ဒရာ၏ အထက်တွင် အမြင့်ရှိသလိုပင် သမုဒ္ဒရာအောက် ရေထုအတွင်းတွင်လည်း ရှိသည်ဆိုပါသည်။ သမုဒ္ဒရာ၏ အထက်အောက်ယူဇနာ အတူတူပင် ဖြစ်ရာ သမုဒ္ဒရာအထက် ရေအပြင်မှ တာဝတိံသာနတ်ပြည်အထိ ယူဇနာ ရှစ်သောင်းလေးထောင် ရှိသကဲ့သို့ သမုဒ္ဒရာအတွင်း၌လည်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ပင် ဖြစ်သည်။
ရေပေါ်တွင် ယူဇနာ ရှစ်သောင်းလေးထောင် ရှိသကဲ့သို့ ရေအောက်တွင်လည်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ရှိရာ နှစ်ရပ်ပေါင်း ယူဇနာ တသိန်းခြောက်သောင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရှစ်သောင်းလေးထောင် နှစ်ပြန်ဆောင်သော တောင်မင်းမြင်းမိုရ်ဟု အဆိုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စကားနှစ်ရပ် မဆန့်ကျင်ပါ။ သော စတုရာသီတိ ယောဇနသဟဿာနိ မဟာသမုဒ္ဒံ သြဂါဟိတွာ အနုပ၀ိသိတွာ ဌိတောတတ္တကမေ၀ ဥဂ္ဂတော န ကေ၀လံ စေတ္ထဥဗ္ဗေဓော စ။ (ဇိနာလင်္ကာရ) ပိဋကတ်ကကျမ်းတို့မှာ ဆိုထားပါတယ်....http://mawluu.blogspot.com/ ဒီနေရာက မေးထားတဲ့ အမေးနဲ့ အဖြေကို ကူးယူထားတာပါ... ဒီအကြောင်းများကိုလည်း ပိဋကတ်ကျမ်းများအား ဖတ်ရူဖူးသူများအား မေးလို့ရပါတယ်.....
ဒီနေရာမှ စာရေးသူတို့ အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပိဋကတ်ကျမ်း(သိုင်းဝတ္တူ)ထဲမှာပဲ ပြောထားတဲ့ မြင်းမိုရ်တောင်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များပဲ မျက်စိလျံ ပြီး မတွေ့တာလား ညံထားလားတော့ မပြောတတ်ဘူးဗျာ.. တချို့ ကလည်း မြင်းမိုရ်တောင်ဟာ ကမ္ဘာ့ အပြင်ဖက်မှာ လိုလို စင်္ကြာဝဠာ ထဲမှာလိုလို နဲ့ ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာ သမုဒ္ဒရာ ပါ ပါလားတော့ ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာ ကျိန်းသေသွားပြီ ဘာဖြစ်လို့လဲဆို သမုဒ္ဒရာရေက ကမ္ဘာမြေကြီးထဲမှာပဲ ရှိတာလေ အာကာသ ထဲမှာ ရေမှမရှိတာဗျာ... ဒါကြောင့် မြင်းမိုရ်တောင်ဟာ ကမ္ဘာထဲမှာပဲ ကျိန်းသေပေါက်ရှိရမယ်ဗျာ... သမုဒ္ဒအတွင်းမှာ မြင်းမိုရ်တောင်က ယူဇနပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် မိုင်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင် (မိုင်ပေါင်း ၆၇၂ဝဝဝ)တယ်... ကမ္ဘာ အချင်းထုထည်က မိုင်ပေါင်း ၂၆၀၀၀၀ ပဲရှိပါတယ်။
ပိဋကတ်ကျမ်းထဲမှာ ရွှီးထားတာက မြင့်မိုရ်တောင်ရဲ့ အမြင့်ဟာဆိုရင်
ဒါက သမုဒ္ဒရာထဲမှာနစ်ဝင်သော အောက်ခြေအပိုင်း = ယူဇနာ ၈၄၀၀၀
ဒါက ရေပြင်အထက်ကနေ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ထိ ရှိတဲ့ အရှည် = ယူဇနာ ၈၄၀၀၀
၁ယူဇနာ = (၈ )မိုင် (သို့) (၁၃) မိုင် (သို့) (၁၂)မိုင်(၅)ဖာလုံ (၈ )သံကြိုး (၄) ကိုက်
အဖြေက သုံးမျိုးဖြစ်နေတယ်..ရပါတယ်ကျုပ်တို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ကို အလိုလိုက်ပေးမယ်...ဒါကြောင့် ၈ မိုင်နဲ့ပဲ မြောက်ပေးလိုက်မယ်နော်...
၈၄၀၀၀ X 8 = ၆၇၂ဝဝဝ
ဒါဆိုတော့ မိုင်နဲ့ဆိုရင် သမုဒ္ဒရာထဲမှာ ၆၇၂ဝဝဝ(ခြောက်သိန်းခုနှစ်သောင်းနှစ်ထောင်) ၊ ရေပြင်မှ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ထိကို ၆၇၂၀၀၀(ခြောက်သိန်းခုနှစ်သောင်းနှစ်ထောင်)မိုင်ရှည်လျားပါတယ်..
ရှိတာမှာ ကမ္ဘာမြေကြီး ထုထည်ဟာ မိုင်ပေါင်း ၂၆၀၀၀၀ ပဲ၇ှိတယ်ဗျာ.... ဒါဆိုတော့ ပိဋကတ်ကျမ်းနဲ့ သိပ္ပံ၇ဲ့အဆိုနဲ့ သိပ်မကွာဘူးနော်.. သေချာတိုက်ကြည့်ပါအုံးဗျာ....စာရေးသူလည်း မျက်စိမှုန်နိူင်တာပဲလေ.... သေချာကြည့်ပေးကြပါဗျာ....သေသေချာချာလေး...ပိဋကတ်(သိုင်းဝတ္တူ)က မှန်ပြီး သိပ္ပံရဲ့ အဆိုက မှားမှာ ဆိုလို့ပါဗျာ...ဒါကြောင့်ပါ သေသေချာချာကြည့်ပေးကြပါ...
မြင်းမိုရ်တောင်၏ သမုဒ္ဒရာအနက်ထဲမှာ၇ှိတဲ့အောက်ခြေနဲ့ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ထိ ကို နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ မြင့်မိုရ်တောင်၏ အရှည်ကမိုင်ပေါင်း ၁၃၄၄၀၀၀ ရှိသွားပါပြီဗျာ...
မြင့်မိုရ်တောင်၏အမြင့် = ၁၃၄၄၀၀၀ မိုင်
ကမ္ဘာမြေကြီး၏ထုထည် = ၂၆၀၀၀၀ မိုင်
(အိုး သိပ်မကွာဘူးနဲ့ ထင်တယ်နော် နည်းနည်းလေးပဲ လွှဲတယ်နဲ့ တူတယ်နော်.....သေချာကြည့်ပေးပါ)ဟီဟီး ရယ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော် ငိုနေတာ ဒီလောက်တောင် လွဲရလားဟ နည်းနည်းပါးပါးဆို လက်ခံပေးချင်သေးတယ်)
ဟင်း ဒါဆို မြင့်မိုရ်တောင်က ဘယ်မတုန်း ဘယ်ဂျောင်ထဲမှာ ရောက်နေတာလဲ..ဒီလောက်ကြီးကြီးမားမား ကမ္ဘာအံ့ဖွယ်ထဲ ထည့်ရမယ့်တောင် မင်းဘယ်နား ရောက်နေတုန်း ကမ္ဘာထက်တောင်မှ ကြီးသေးတယ်တောင် မင်းကို မတွေ့တာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အရှက်ကွဲတော့မယ်.. မင်းပုန်းမနေပါနဲ့ မြင့်မိုရ်တောင်ရယ် ထွက်ခဲ့စမ်းပါ... ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ရှက်ပြီးသေတော့မယ်.... ဒါကျီစားလို့ရတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘူး.....
မပြီးသေးဘူးနော် တာဝတိံသာနတ်ပြည်ရှိသေးတယ် ကျုပ်စိတ်ဝင်းစားမိတဲ့ နတ်ပြည်လေ (နတ်သမီးဘယ်ညာငါးရာဆိုတော့ ဟီဟီ သေးပေါက်ချိန်တောင် ရမယ်မထင်ဘူး နည်းနည်းရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပေး စာရေးသူက တခါတလေ အပြောအဆိုမတတ်ဘူးလေ)
သမုဒ္ဒရာအထက် ရေအပြင်မှ တာဝတိံသာနတ်ပြည်အထိကို ၆၇၂ဝဝဝမိုင် လို့ဖြေထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယနေ့သိပ္ပံပညာရှင်များ တွေ့ရှိချက်များအရမှာဆိုရင် ကမ္ဘာကနေ အင်္ဂါဂြိုလ်ကို မိုင်ပေါင်း သန်း ၂၅ဝ ကွာဝေးပါတယ်လို့ သိရပါတယ်. ... ဒါက ကမ္ဘာနဲ့အနီးဆုံးဂြိုလ်ပဲရှိသေးတယ် သိပ္ပံပညာ တွေ့ရှိချက်တွေအရကတော့ အင်မတန်ဝေးတဲ့ ပလူတို ဂြိုလ် အထိကို တွေ့ရှိထားပြီးပါပြီ။ ဒါဆိုဘာပဲပြောပြော ယူဇနပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင် မိုင်ပေါင်း ၆၇၂ဝဝဝ သာဝေးတဲ့ တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကို ကြိမ်းသေတွေ့ရှိနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နာဆာ အဖွဲ့ရဲ့ညံ့ဖျင်းမှု့ကြောင့် တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကို မတွေ့ ရသေးတာဘဲလို့ ယူဆလိုက်ပါတယ်။ အင်းတော်တော်ညံ့ဖျင်းတဲ့ နာဆာအဖွဲ့ပဲ ဒီနတ်ပြည်လေးတောင် မတွေ့ဘူးလား ... ဟဲ့ နင်တို့ အဖွဲ့က ဘာအဖွဲ့ တုန်း အင်း ဒီလောက် သဘာဝနဲ့ခေတ်ညီ သိပ္ပံထက်သာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ပိဋကတ်ကျမ်းကဆိုထားတာတောင် နင်တို့က တွေ့အောင် မရှာနိုင်တဲ့ငနာတွေ နင်တို့တော်တော်ညံတယ်.. (ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းရှင်လူများခင်ဗျာ ကျုပ်ကို ဒီတခါတော့ မဆဲဘဲ နာဆာအဖွဲ့ရဲ့ ညံဖျင်းမူကြောင့် တာဝတိံသာနတ်ပြည်ကို မတွေ့ရတာပါဗျာ.. ကျတော်မှာ အပြစ်မရှိပါဘူးဗျ.... ဟီဟီး ဒီတခါတော့ ရယ်ရလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင် ကျမိသေးတယ်ခွီးခွီး)
မြင့်မိုရ်တောင်၇ှိသည်ဟု မယုံလျှင် ဆဲမည်
Posted by messenger at 2:25 AM
Labels: ဘယ်နားမှာလဲ မြင့် မိုရ်တောင်, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ
ခင်ဗျားတို့ အဖြေအား တင်ပေးမယ် လောလောဆယ် နှစ်ရက်အချိန်ပေးသေးတယ်
အရင်ဆုံး အနေနဲ့ စာရေးသူပြောချင်တာက ခင်ဗျားတို့ကို မေးထားတဲ့ နိဗ္ဗာန်ရဲ့ အဖြေက ပြီးပြီလား ပြီးရင် ကျွန်တော်က ဖြေရှင်းတော့မယ်နောက်နှစ်ရက်ကြာရင်ပေါ့...ဒါကြောင့် စာရေးသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိရသည့်မှာ မကိုက်ညီမူတွေ တွေ့ ရှိနေပါတယ်..... ဥပမာ ဒီလိုစာသားမျိုး ဒါက လုံးဝယုတ္တိမဆန်တော့ဘူးလေ...
(နိဗ္ဗာန်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို သိနိုင်ဖို့ ၊ ရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့ နည်းကို သိနိုင်ဖို့ ၊ သတ္တ၀ါတွေကို ပြောပြနိုင်ဖို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟာ လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလပတ်လုံး ကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ရ) တယ်ဆိုတော့ ကျုပ်အသက်က အလွန်ဆုံး၉၀ကျော် ၁၀၀ပဲ ထားပေါ့ဗျာ..... ခင်ဗျားတို့ဟာကလည်း ရွှီးထားကလည်း နည်းနည်းလျော့ပါအုံးဗျာ.. ယနေ့ ထိတကမ္ဘာတောင် ကုန်တောင်မကုန်သေးဘူး လူတွေ ဒီလောက်ငြင်းခုံ ဆူပူနေရတာ.. လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလပတ်လုံး ကျင့်ကြံရမယ်ဆိုလဲ ယုတ္တိမဆန်တော့ဘူးလေဗျာ... ဂေါတာမတောင် လူလောကမှာ အသက်ရှင်နေထိုင်သွားတာ အသက်(၈၀)ကျော်ထိပဲ အသက်ရှင်နေနိုင်သွားတာလေ ယခုလက်ရှိဂေါတာမနေထိုင်သွားတဲ့ တစ်ကမ္ဘာတောင် မကုန်သေးဘူဗျာ....
(အသက်၇ှည်လို့ ကိုးကွယ်ရကြေးဆိုရင်လည်း ကျုပ်အဖွားရဲ့ ညီမအဖွားလေး အသက် (၁၀၀)ကျော်ထိနေသွားတဲံ အဖွားကိုပဲ ကိုးကွယ်လိုက်မယ်ဗျာ)... လေးသင်္ချေနဲ့ ကမ္ဘာတစ်သိန်းကာလပတ်လုံး ကျင့်ကြံရမယ်ဆိုရင်လည်း ဘယ်ဘာသာဝင်မှ ခင်ဗျားတို့ဘာသာကို စိတ်ဝင်စားလာမှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ.. ဒါကြောင့် ခင်ဗျားတို့ အဖြေတွေ ကို ဆီလျော်အောင် ထက်လုပ်ပါအုံး တချို့  အဖြေလေး ကျုပ်ကြိုက်တယ် နပ်လို့တော့ ကောင်းမယ်ထင်တယ်.
Posted by messenger at 2:13 AM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, လေတွေ နည်းနည်းလျော့
Posted by messenger at 8:41 PM
Labels: မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, မေးခွန်းလေး ဆယ်ခုထဲပါ
Posted by messenger at 11:59 PM
Labels: ကျွန်တော်ပြောချင်သော စကားအချို့ , မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ
Posted by messenger at 11:50 PM
Posted by messenger at 6:37 AM
စင်္ကပူက မှာသိုင်းရူးထလို့ ဖမ်းခံရတယ် စောက်ရူး ဘုန်းကြီး
Posted by messenger at 6:00 AM
Labels: ဗီဒီယို, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ, သိုင်းရူး ဘုန်းကြီး
ပိဋကတ် သုံးပုံ ဟူ၍အမည်တွင်သည်ကိုပြခြင်းအကြောင်း (သို့) အားရွှီး သိုင်းကျမ်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းအကြောင်းရင်း
ဂေါတာမ(ကုလား) သေပြီးနောက် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ ပြည့်သောအခါ။ သုဝဏ္ဏဘုမ္မိတိုင်း။ သထုံပြည်ကို အစိုးရသော။ (ဤသထုံပြည်ကို သူတောင်းစား လိမ်စား ဘုန်းကြီးA bomb က ယိုးဒယားနိူင်ငံ ဇင်းမယ်မြို့  လို့ လည်း ပြောချင်တယ် အင်ဒိုနီးရှားလို့လည်း ပြောချင်တယ် ရတယ် သူအဆင်ပြေတဲ့နေရာပေါ့)
မနူဟာမင်းလက်ထက်။ တလိုင်းရဟန်းတို့သည်။ ယခုမြန်မာ ရဟန်း၊ ရှင်လူတို့သည်။ ကံဒွါယ ကွဲပြားကြသည်နည်းတူ။ တလိုင်း ရဟန်း၊ ရှင်လူတို့သည်လည်း။ အယူဝါဒ ကွဲပြားကြ၍။ ၀ိဝါဒအဓိကရုဏ်းဖြစ်ကြသောအခါ။
မနူဟာမင်းသည်။ ဤအမှုကို ပြေငြိမ်းစေခြင်းငှာ။ မူးမတ်တို့နှင့် တိုင်ပင်၍ မိမိနိူင်ငံတော်အတွင်းရှိသော။ ကျမ်းစာအများတို့ကို စုသိမ်းစေပြီးလျှင်။ ရှင်ဗုဒ္ဓဃောသ မှစ၍ ဆင်းသက်ဆက်နွယ်သော ရဟန်းဆရာတို့ စီရင်ရေးသားထားခဲ့သော ကျမ်းဂန်တို့နှင့် တိုက်စေကြရမည်။ ၎င်းရဟန်းဆရာတို့ စီရင်ရေးသားခဲ့သော ကျမ်းဂန်တို့နှင့် အယူအဆ ၀ါဒကွဲပြားခြင်းမရှိရ။
ကွဲပြားမညီညွတ်သော ကျမ်းဂန်တို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းရမည် ဟူ၍ အမိန့်တော် ထုတ်ပြန်သောအခါ။ မူးမတ်အစရှိသောမြို့ချုပ်။ မြို့အုပ်တို့သည်။ အရပ်ရပ်၌ ရှိသောကျမ်းဂန်တို့ကို စုသိမ်းပြီးလျှင်။ အမိန့်တော် ရှိသည့်အတိုင်း။ တိုက်ကြည်စေ၍။ အဓိပ္ပါယ်တူရာ။ ကျမ်းရင့်။ ကျမ်းနု။ ကျမ်းလတ်။ သုံးစု ၊ သုံးပုံ ရွေးချယ်စီရင် စေပြီးလျှင်။ မဟာနာမ်မင်းလက်ထက်က။
ရှင်အာနန္ဒာရေးသားထားခဲ့သော။ အဘိဓမ္မာ ၇ ကျမ်း နှင့် တကွ ၎င်း ကျမ်းသဘောကို အမှီပြု ၍။ အကျယ်ဖွင့်ပြရေးသားထားသော အဠကထာ။ ဋီကာ။ အနု။ မဓု။ လက်သန်း။ ဂဏ္ဍိယောဇနာ အစရှိသော ကျမ်းတို့ ကိုအဘိဓမ္မာ ၇ ကျမ်း၏အင်္ဂါနိကာယ်ဟု ရေတွက်ပေါင်း၍။ များသောအပြားရှိသော အရာတို့ကို သမ္ပိဏ္ဍေတိပေါင်း၏ ။ ။ထို့နောက်မှတော့ ပိဋကတ် သုံးပုံ ဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြသည်။
Posted by messenger at 6:26 AM
Labels: ပိဋကတ် သိုင်းကျမ်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံ, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ
ငရဲက ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အောက် ယူဇနာပေါင်း ၂-သိန်း၊၄သောင်း တွင် ရှိသည်ဟု ပိဋကတ် သိုင်းကျမ်း၌ ဆိုထားသည်.
အခုပြောမဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့စကားကို ငြင်းကြအုံးမယ်စိတ်ချ ကျွန်တော်ပြောမှာကလည်း သူတို့ကျမ်းထဲက အတိုင်းပဲဗျာ။ ကျွန်တော် ရှေ့ မှာ ရွတ်ခဲ့တယ် ကဗျာလေးလိုပဲ..... ငရဲပြည်၏ တည်နေရာ အတိအကျမရှိ ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲယူ သိပ္ပံက အတိအကျထောက်ပြလျှင် ရဟန်းနာ ကို အပြစ်ပုံ ချ အိုး ကောင်းလားလေစွ ကောင်းလေးစွ အခုကတော့ ငရဲပြည်၏ တည်နေရာပါ.. ယနေ့တိုးတက်ပြီး စုတ်ပြတ်သပ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာချီး၏ မဟုတ်မမှန်သော အကြောင်းလေးများကို ဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင် အလွန်လည်း ရင်မောဖွယ်ကောင်းပါတယ်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေတို့ ဟာသ အပျင်းပြေအနေနဲ့ ဖတ်ချင်ရင် အကြည်တော်တို့ ဘာတို့ မဖတ်နဲ့နော်.... ဗုဒ္ဓ၀င်သိုင်းကျမ်းကိုဖတ်ပါလို့ ပြောချင်းပါတယ်..... ကမ္ဘာ မြေကြီးရဲ့ ထုထည်ဟာ ယူဇနာပေါင်း ၂-သိန်း၊၄သောင်း ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁ယူဇနာ = (၈ )မိုင် (သို့) (၁၃) မိုင်သော်လည်းကောင်း (သို့) (၁၂)မိုင်(၅)ဖာလုံ (၈ )သံကြိုး (၄) ကိုက်
စာရေးသူဒီနေရာမှာ မိတ်ဆွေတို့ စာသင်တဲ့အခါ
၁၂ လက်မ ၁ ပေ
၃ ပေ ၁ ကိုက်
၂၂ ကိုက် ၁ သံကြိုး
၁၀ သံကြိုး ၁ ဖာလုံ
၈ဖာလုံ ၁မိုင် ဟု တိတိကျကျဂဏာန်းများနှင့် သင်ကြားခဲ့တယ်နော်.... ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးဂဏာန်းများက အတိအကျကြီးပဲ ... ဗုဒ္ဓသိုင်းကျမ်း ပိဋ်ိကတ် (ပြိတ္တာကတ်)ထဲမှာရှိတဲ့ ယူဇနာကတော့ ၁ယူဇနာကို (၈)မိုင် (သို့မဟုတ်) ၁၃ မိုင် (သို့) ၁၂မိုင်(၅)ဖာလုံ (၈)သံကြိုး (၄)ကိုက်တဲ့ ဗျာ.. အခုထိ၁ယူဇနာကို မှန်မှန်ကန်ကန်ကို အဖြေမထုတ်နိူင်ကြသေးဘူး ... ကျွန်တော်မြင်တာ ကျွန်တော်ပြောမယ်နော် သူတို့ ရွှီးလုံးထုတ်ထားတဲ့ ဂဏာန်းများဟာ မှားယွင်းသွားရင် ဖာသည်ပါးစပ်လို ပြင်နိူင်အောင်လို့ (၈)မိုင်ပြောတဲ့သူက ပြော....... (၁၃)မိုင် ပြောတဲ့သူကပြော ...... (၁၂)မိုင်(၅)ဖာလုံ (၈ )သံကြိုး (၄) ကိုက် ရှိတယ်လို့ ပြောတဲ့သူက ပြောနဲ့ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို အဆင်ပြေတဲ့ ဂဏာန်းနဲ့ တွက်ချက်ပြီး မညီညီအောင် ( မညီညီအောင်ကို ပြောခြင်းမဟုတ်) ညှိမယ်ဗျာ... အဲဒီသဘောပဲ... ဘောလုံးကစားနည်းနဲ့ ပြောရရင် ဗုဒ္ဓ၀င်ကျမ်းက မြှပ်ကွက်နဲ့ ကစားတာပေါ့နော်..
၁ပေ = ၁၂ လက်မ (သို့) ၁၄လက်မ(သို့) ၁၅လက်မ
၁ကိုက်လျှင် ၃ပေ (သို့) ၄ပေ(သို့) ၅ပေ ရှိပါသည်ဟု
မိတ်ဆွေတို့ ကြားဖူးလား သင်ဖူးလား.. ယနေ့စုတ်ပြတ်သပ်နေတဲ့ သိပ္ပံပညာမှသာ မရှိပေမယ့် အရမ်းကိုကောင်းမွန်ပြီး အမွန်းတင်လို့မဆုံးတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်သိုင်းကျမ်းဝတ္တူနှင့် ပိဋ်ိကတ် (ပြိတ္တာကတ်) ကျမ်းတို့မှာတော့ ရှိတယ်.. ဘယ်ဂဏန်းကို ယူပြီး တွက်ပေးရမှန်းကို မသိတော့ဘူးဗျာ.. ရပါတယ်သူတို့ စိတ်တိုင်းကျပေါ့ဗျာ သူတို့အရပ်နဲ့ သူတို့ဇာတ်ဆိုတော့လည်း သူတို့တွေက ကုလားမျိုးနွယ်သာလိကာ ဆိုတော့ ဦးစားပေးလိုက်ပါ....
သူတို့က ဖြစ်နိူင်ရင် ဂေါတာမရဲ့ အမျိုးအနွယ်ကို အရမ်းဖြစ်ချင်ကြတာ... မွန်သူတောင်းစားဘုန်းကြီး ရှင်အရဟံမှ စတင်ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ မြန်မာပြည်ကို ပေါက်ဖွားလာတာပါ.. ဒါပေမဲ့သူတို့ကို အဲလို့ သွားမပြောနဲ့ မကြိုက်ဘူးဗျာ သာလိကာ မျိုးနွယ်လို့ ပြောမှာ ကြိုက်တာဗျာ..
ကမ္ဘာ မြေကြီးရဲ့ ထုထည်ဟာ ယူဇနာပေါင်း ၂-သိန်း၊၄သောင်း ရှိတယ်လို့ သူတို့ သိုင်းကျမ်းဝတ္တူ သိုင်းဂိုဏ်းချုပ်ကိုယ်တိုင်က ပိဋ်ိကတ် (ပြိတ္တာကတ်)သုံးပုံထဲမှာ ရွှီးလုံး ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်.....
၂သိန်း.၄သောင်း အမြောက် ၈မိုင် ပဲထားလိုက်မယ်နော် စာဖတ်သူများအားလုံးသဘောတူညီစွာ ဗုဒ္ဓဖာသည်များကိုပဲ ဦးစားပေးလိုက်ကြပါ.. မိုင်သန်းပေါင်း ၁၉၂၀၀၀၀ ရပါတယ်... ဤနေရာမှာ သွားရောက်ကြည်ရှူမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာမြေကြီး diameter ကိုတွေ့ရှိနိူင်ပါတယ်.... ဒါကတော့ သိပ္ပံရဲ့ အတွက်အချက်ပေါ့နော်.. http://geography.about.com/library/faq/blqzdiameter.htm
သိပ္ပံ၏ အဆိုအရ ကမ္ဘာမြေကြီး၏ထုထည်သည် မိုင်နဲ့ ဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင် မိုင်ပေါင်း နှစ်သိန်း ခြောက်သောင်း( ၂၆၀၀၀၀) နီးပါး ခန့်သာ ရှိပါတယ်။ ဒါတောင် ၈နဲ့ပဲ မြောက်ရသေးတယ် ၁၂ မိုင်သာ မြှောက်လိုက်ရင်တော့
(ခေါင်းညိမ့် နှုတ်ပိတ် ငါနားလည်ပေးမယ် ဖြေး... ဖြေး .. ရွှီး... ဖြေးဖြေးလေး ရွှီးပေါ့ကွယ်)
ကဲဘယ်လောက်တောင် ကွာသွားပြီးလဲ သိပ်မကွာပါဘူးနော်
(ဒါက ဗုဒ္ဓသိုင်းကျမ်း အဟော) ............. ၁၉၂၀၀၀၀
(သိပ္ပံရဲ့ အဖြေ) ................ ၂၆၀၀၀၀နီးပါး
(စာရေးသူ မျက်လုံးများ မှုန်သလားလို့ ကြည့်ပေးကြပါအုံးဗျာ)
မိုင်ပေါင်းသန်း ၁၉၂၀၀၀၀ ဟာ မြေကြီးရဲ့ ထုထည်ပဲ ရှိသေးတယ် ...မြေကြီးအောက် ငရဲရဲ့ တည်နေရာ မပါသေးဘူး... ငရဲ တောင် ရိုးရိုးင၇ဲမဟုတ်ဘူးဗျ ငရဲ ရှစ်ထပ်တဲ့ဗျာ (ငရဲ ရှစ်ထပ်မှာ အိမ်သာ ရေချိုးခန်း ရေမီးအပြည့်အစုံနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းကို ထားဖို့တဲ့ဗျာ ဂေါတာမက သူကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်း စိတ်ကူးနဲ့ ပုံဖော်တည်ဆောက်ထားပါတယ်တဲ့ဗျာ. . ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မည်သူမဆို သွားရောက်တည်းခိုနေနိုင်သည်.)
ငရဲ (၈) ထပ်ဟာ မြေမျက်နှာပြင်ကနေ ယူဇနာ (၁၅၀၀၀) ရှိတယ်တဲ့... ဒါသူတို့ပြင်လိုက်တာ စာရေးသူသိတာ ငရဲကမြေမျက်နှာပြင်ရဲ့ အောက်ယူဇနာ (၁၅၀၀၀၀)မှာ ရှိတယ်လို့ ငယ်ရွယ်စဉ်က ဂတုံးလိမ်စားဘုန်းကြီးများရဲ့ ပြောဆိုမူကို ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်.... ထားပေါ့တော့ဗျာ (၁၅၀၀၀) ထားပေါ့ဗျာ. ၁၅၀၀၀ ကို ၈မိုင်နဲ့ မြှောက်တော့ မိုင်ပေါင်း ၁၂၀၀၀၀ ရပါတယ်. ဒီမှာတင် ငရဲတစ်ထပ်က စရှိနေပြီ ရှိတာမှ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ထုထည်က ၂၆၀၀၀၀ ခန့်မှာ ရှိတာ.. အဲ့တာက တထပ်ပဲ ရှိသေးတယ် နောက်တထပ်ကို ရောက်ဖို့ ယူဇနာ ၁၅၀၀၀ထပ်သွားရအုံးမယ်ဗျာ .. နောက်ထပ်ငရဲအထပ်များအကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရမှာတော့ ကျန်သေးတဲ့ ငရဲများက ကမ္ဘာအပြင်ကို ရောက်သွားပါပြီဗျာ... ဒေါက်တာ မင်းတင်မွန်တို့ နိူင်ငံရပ်ခြားခရီးစဉ် ထွက်တဲ့အခါတိုင်းမှာ မေးခံရတယ်တဲ့ဗျာ.. ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ ဘဘောတူညီစွာနဲ့ပဲ သီဟိုဠ်ကသိုင်းဆရာတော်အားရွှီး ပြီး ရေးတဲ့ အဋ္ဌကထာက စကားတွေပါပဲတယ်ဗျာ. .ဇာတ်လမ်းဖျောက်ဖျက်လိုက်ပါ ပြီတယ်ဗျာ..ဒါကိုလည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံပြီးသားပါ......
ခွေးသူတောင်းစားA Bomb သို့
A Bomb ဆိုတဲ့ ငနာဘုန်းကြီး ဂတုံးရေ မင်းကတော့ မင်းစောက်ရှက်မရှို လာလာဖော်ထုတ်တယ်နော်. မင်းရေးထားတွေ ကို ငါဖြေရှင်းပေးအုံးမယ်.. လေထုထဲမှာ ရှင်နိူင်သော သုတ်ပိုးရှိရင် သိပ္ပံပညာရှင်များထံ အကြောင်းကြားပြီးပို့ပေးလိုက်ကွာ ... မင်းကိုကမ္ဘာအထူးဖွဲ့ ပညာရှင်အနေနဲ့ ထားပေးပါလိမ့်မယ်.
Posted by messenger at 3:32 AM
Labels: ငရဲက ဘယ်မှာလဲ????, မဟုတ်မမှန်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ